‘भिण्डी’को फाइदा,घामले डडेको छाला र कपालको लागि बरदान !
काठमान्डौ। हामीले तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्ने भिंडिले छाला र कपालसम्बन्धि धेरै समस्याबाट छुट्कारा दिलाउँछ । जस्तै ः ड्राई स्किन , स्किन इन्फेक्शन , कालो छाला, डेंड्रफ आदि । भिंडिको प्रयोगबाट जवान देख्न सक्ने ८ ब्युटि टिप्सहरु यसप्रकार छन् ।
१. कपालको चांया हटाउन: सबैभन्दा पहिला भिंडिलाई सानो गरि काट्नुहोस् । त्यसपछि उमालेको पानीमा हाल्नुहोस् । चिसो भईसकेपछि पानीलाई छानेर आधा कागतीको रस मिसाउनुहोस् र शैंपु लगाईसकेपछि अन्तमा यस पानीले कपाल पखाल्नुहोस् ।
भिंडिमा प्रोटिन पाईन्छ । र यस्ले टाउकोमा ब्लड सर्कुलेशनलाई बढाउँछ । जस्ले कपाल बढाउन, चांया हटाउन , कपाललाई टल्काउन मद्धत गर्छ ।
२. स्कैल्प मोइस्चराइजर:
८ वटा भिंडिलाई थोरै पानीमा उमाल्नुहोस् । हल्का गाढा च्यापच्याप गर्नै तरल पदार्थ बनिसकेपछि छानेर अलग राख्नुहोस् । र त्यसमा बासनाको लागि आफूलाई मनपर्नै तेल मिसाउनुहोस् । र नुहाइसकेपछि यस पानीले पखाल्नुहोस् । यसबाट तपाइँको कपाल नरम, शिल्क र टल्किने देखिनेछ ।
यदि २–४ दिन सम्म भण्डार गर्नुहुन्छ , भने डिस्टिल वाटरमा यसलाई बनाई फ्रिजमा राख्नुहोस् । यसको प्रयोग हरेक किसीमको कपाललाई सुहाउँछ । ड्राई , कर्ली कपालको लागि यस्ले धेरै राम्रो मोइस्चराइजरको रुपमा काम गर्छ । यसले डैंड्रफ र स्कैल्पको चिलाउने समस्याको पनि निराकरण गर्छ ।
३. हेयर कन्डिशनर:
माथि तयार गरिएको भिंडिको पानीमा कागती नमिसाइकन नुहाईसकेपछि कपालमा लगाई मसाज गर्नुहोस् । २ मिनेट राखि सफा पानीले कपाल पखाल्नुहोस् ।
४. टल्किने कपाल:
राति दुई कप भिंडिलाई काटेर दुई कप पानीमा १५ मिनेट उमाल्नुहोस् । त्यस पानीलाई छानेर १० मिनेट सेलाउन दिनुहोस् । र अर्कौ भांडामा राखी रातभरीको लागि छोड्नुहोस् । बिहान यस्लाई कंडिशनरको रुपमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
सुन्दर छालाको लागि: एउटा भिंडिलाई काटेर सफा पानीमा आधि घण्टा भिजाएर राख्नुहोस् । यसलाई कपासको मद्धतले अनुहारमा लगाउनुहोस् र सुकाउनुहोस । अनि सफा पानीले मुख धुनुहोस् । भिंडिमा एन्टिब्याक्टेरियल , एन्टिफ्लामेटरी र रीहाइड्रेटिंग आदि पाईन्छ ।
जस्ले ड्राई स्किन र कुनैपनि स्किन ईन्फेक्शनको समस्या हटाउन मद्धत गर्छ । छाला चिलाउने समस्या हटाउन पनि यस्ले मद्धत गर्छ । भिंडिमा भिटामिन ‘सी’ र ‘इ’ पनि पाईन्छ । जस्ले छालाको दागहरु हटाउँछ । र घामबाट कालो भएको छालालाई गोरो बनाउँछ ।
आकर्षक छालाको लागि:
आधा कचौरा पानीलाई उमाली २–३ भिंडि र आधा चम्चा जीरा हाल्नुहोस् । र ८–१० हरियो धनियाँ हाली उमाल्नुहोस् । त्यसपछि छानेर चिसो हुन दिई ३–४ दिनसम्म फ्रिजमा राख्नुहोस् । यसलाई अनुहार , हात र खुट्टामा लगाई एक घण्टासम्म त्यसै छोड्नुहोस् । अब काक्रोंको जुसलाई अनुहारमा लगाई ५ मिनेट छोड्नुहोस् । अनि सफा पानीले मुख धुनुहोस् । गोरो छालाको लागि हप्तामा दुईचोटि प्रयोग गर्नुहोस् ।
कन्डिसनर बनाएर बाँकी भएको भिंडिलाई पिसेर पेस्ट बनाई अनुहारमा लगाउनुहोस् । १५ – २० मिनेट लगाई सफा पानीले मुख धुनुहोस् ।
सन्दर खुट्टाको लागि: कच्चा भिंडिको पेस्ट खुट्टामा राम्ररी लगाई मसाज गर्नुहोस् । र सुकेपछि सफा पानीले धुनुहोस् । यसबाट तपाइँको खुट्टा सुन्दर देखिने छ ।